कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ
query_builderMay 26, 2017 11:34 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility300
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइरहेपछि पहिलो पटक आउन लागेको बजेटलाई उद्योगी–व्यवसायीहरूले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् ।
वीरगन्जका सरोकारवालाले चाहिँ संघीय आर्थिक प्रणालीलाई चलाउने अनुभव नभएकाले त्यसलाई गहिरोसँग बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा अबको तीन तहको बजेट, राजस्व बाँडफाँड तथा करलगायतका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा वीरगन्जका अर्थशास्त्री तथा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानी :
अप्रत्यक्ष करमा ध्यान दिनुपर्छ
अध्यक्ष , निम्बस समूह, वीरगन्ज
संविधानले नै स्थानीय तहलाई केही आर्थिक अधिकार दिएको छ । साथसाथै संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्व बाँडफाँड गर्न वित्तीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । बाँडफाँडका केही निर्देशक सिद्धान्त पनि छन् ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने संघीय आर्थिक प्रणालीलाई चलाउने हाम्रो अहिले अनुभव नै छैन । त्यसकारण अहिले सैद्धान्तिक कुरा बढी आएका छन् । तर, व्यावहारिक कुरा भने आउन बाँकी छ । प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा तत्काल अहिले स्थानीय तहको आधा क्षेत्र गठन भयो ।
अब स्थानीय तह गठनपछि उनीहरूले अधिकार त प्राप्त गर्छन्, तर अब यहाँ समस्या के देखिएको छ भने स्थानीय तहलाई यसपालिको बजेटबाट कुन आधारमा राजस्व लिन दिने ? अनुदान कसरी दिने ? यसको आधार के हो ? भन्ने छ । वित्तीय आयोग गठन भएको छैन । जनसंख्याका आधारमा बाँडफाँड गर्ने हो कि ?
काठमाडौंको संरचना, वीरगन्जको संरचना र कलैयाको संरचना अलग–अलग छ । संरचना बाँकी भएको हुँदा अहिले तत्काल बजेट संघबाट नै आउने हो । त्यसकारण यो कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा संघबाटै हुन्छ होला । अहिलेसम्म जुन व्यवहारमा बजेट दिइँदै आएको छ, त्यसरी नै दिइन्छ । प्रदेशसभा जबसम्म कायम हुँदैन तबसम्म स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ ।
बजेटको मुख्य चुनौती प्रशासनिक खर्च कसरी गर्ने भन्ने हो । निर्वाचन सबै भए पनि यसपालिको बजेट संघबाटै आउँछ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना बनिसकेपछि प्रदेशले बजेट ल्याउने हो । अहिले त्यो दुई तीन वर्ष लाग्न सक्ला । त्यति बेलासम्म प्रदेशको बजेट संघबाट हुन्छ । प्रशासनिक बजेट कति छुट्ट्याउने ? एकमुस्ट खर्च छुट्ट्याउन ठीक छ तर त्यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
त्यसकारण वित्त आयोगको व्यवस्था भएअनुसार सातवटा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च पनि साथसाथै आउनुपर्छ, जुन एक÷दुई वर्षसम्ममा वैज्ञानिक आधार तयार हुन्थ्यो । अर्को मलाई लागेको कुरा अहिले भारतमा स्थानीय र प्रदेश निकायले लगाउँदै आएको करलाई हटाएर केन्द्रीय कर (जीएसटी) लगाउन लागेको छ । तर नेपालमा ठीक त्यसको उल्टो विकेन्द्रीकरण हुँदै छ ।
यसले गर्दा पनि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप बढी खर्चिलो छ । उत्पादनमैत्री छैन । झन् विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने यसले उत्पादनलाई असर पर्ला कि भन्ने शंका छ । त्यो नहुन दिनका लागि प्रदेशले दिएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट दिएका सेवाहरूसम्म मात्र पैसा उठाउन ठीकै हो । जहाँसम्म अप्रत्यक्ष करका कुरा छन्, यो प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाउनु हुँदैन ।
अहिले रहेको केन्द्रीय मूल्य अभिवृद्धि कर छ, अन्तःशुल्क छ, यो खारेज हुनुपर्छ । भारतमा जस्तो एकीकृत कर प्रणाली (जीएसटी) जस्तै हामीकहाँ पनि पनि अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
राजस्व बाँडफाँडका लागि वित्तीय आयोग गठन गरेर त्यसलाई नै अधिकार दिनुपर्छ । वित्तीय आयोगले कुन आधारमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम गर्ने हो भने तत्कालका लागि गहिरो जटिलता आउन सक्छ । वित्तीय आयोगले पनि व्यावहारिक रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ । त्यो जनसंख्याका आधारमा होस् वा स्रोत साधनका आधारमा होस् ।
राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नेलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँड पनि वित्तीय आयोगले नै गर्ने हो ।
वित्त आयोगले गरे पनि प्रदेशको आय पनि राजस्वबाटै हुन्छ होला । प्रदेशलाई सफल बनाउन कर लगाउन सवालमा त्यहाँ प्रतिद्वन्द्वी प्रतिस्पर्धी देखा पर्न सक्छन् । तराईमा जनसंख्याका आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्ने हो भने राजस्व ५० प्रतिशत नै चाहियो भन्ने आवाज आउन सक्छ । त्यसैले यो निकै जटिल छ । प्रदेश गठन भएपछि यो समाधान हुन सक्ला ।
अर्को कुरा, प्रदेश पनि संघसँग परनिर्भर हुनु हुँदैन । हाम्रो मानसिकता सबै माथिबाटै आउँछ भन्ने छ । संघमाथि नै निर्भर रह्यो भने प्रदेशको महŒव नै रहेन । प्रदेश स्वायत्त र सशक्त हुनुप-यो । यहाँनेर कर उठाउने हो भने अप्रत्यक्ष करमा ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ
प्राध्यापक, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगन्ज
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश गठन नभएसम्म प्रदेशको अधिकार केन्द्रमै रहन्छ । त्यसकारण अहिले पनि गत वर्षको जस्तै बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको तीन प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेको छ ।
बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहले संविधान प्रदत अधिकारभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्छ । स्थानीय तहका लागि मुख्य स्रोत केन्द्रीय बजेटबाट आउने अंशदान नै हुने हो । केन्द्रीय बजेटको एकतिहाइ हिस्सा स्थानीय तहमा आउने भनिएको छ । स्वाभाविक रूपले यसमा बजेट व्यवस्थापन र खर्च गर्ने क्रममा चुनौती रहेको छ ।
किनकि राष्ट्रिय स्तरको संरचनाले अढाई खर्बको विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यो स्थानीय स्तरमा संरचनात्मक सुधार र संरचनात्मक विकास नगरीकन ठूलो रकमलाई स्थानीय तहबाट कसरी व्यवस्थापन हुन सक्ला, त्यो सरकारको चुनौती हुन सक्छ । हुन त स्थानीय विकासको दृष्टिमा यति ठूलो रकम आउनु स्वागतयोग्य हो ।
किनकि यसबाट क्षेत्रीय विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । मुख्य त खर्च व्यवस्थापन, योजना निर्माण र योजना कार्यान्वयनका लागि उचित संरचनात्मक व्यवस्था नहुन्जेलसम्म यति ठूलो बजेटको लगानी व्यावहारिक रूपमा कठिन नै हुनेछ । स्थानीय स्तरका आफ्नै समस्या बुझेर त्योअनुसार योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय स्तरको विकासक्रमका सकारात्मक सुरुवात हो ।
सकारात्मक हँुदाहुँदै पनि योजनाको सफल कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या छ । केन्द्रीय स्तरमा अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि संरचनात्मक सुधार नगरिएको र आधुनिकीकरण नगरिएका कारण केन्द्रीय बजेट नै खर्च गर्न गाह्रो छ । निकासी प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया, लेखापरीक्षणको समस्या र बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानुले पनि समस्या हुन्छ ।
यी समग्र प्रभावका बीचमा भ्रष्टाचार पनि महŒवपूर्ण समस्या देखिएको छ । यसको निराककरणका लागि खर्च व्यवस्थापनको संरचनात्मक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नहुन्जेसम्म गाह्रो हुन्छ, जुन उद्देश्यले विकेन्द्रीकरणका आधारमा बजेट ल्याइएको छ, यसले सफलतामा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यो प्रयोग पछिल्लो वर्षको बजेटमा पनि आयो ।
विशेष गरेर तराईका नगरपालिकालाई आन्तरिक आधारभूत संरचना विकास गर्न ५०÷५० लाख अतिरिक्त बजेट दिइएको छ । तर, कार्यान्वयन कति वास्तविक रूपमा भएको छ ? त्यो हामीले देखेकै छौं । हामी पहिले योजनाको पहिचान गरौं कुन सहरको के समस्या हो ? त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई लाग्नुपर्ने कति उपयुक्त बजेट हुन्छ त्यो बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कुन–कुन शीर्षकमा हुनुपर्छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ र समानुपातिक पनि हुनुपर्छ । प्रारम्भिक चरणमा चुनौती हुन्छ । प्रादेशिक बजेट बनाउँदा प्रदेशको वास्तविक अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रदेशका विज्ञहरूको सुझावमा बजेट बनाउँदा प्रभावशाली हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत् आपूर्तिमा आएको सुधार र बन्द–हड्ताल पनि नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भयो ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । केन्द्रमै बसेर वीरगन्ज, पोखरा, मन्थलीका लागि बजेट बनाइदिँदा प्रभावकारी हुँदैन ।
बजेट निकासा र बजेट खर्चमा नीतिगत कठिनाइले पनि समस्या खडा गरेको छ । त्यसलार्ई पनि सरलीकरण गर्नुपर्छ र समयमा त्यो बजेट आउनुपर्छ अनि समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । त्यही समस्या स्थानीय तहमा पनि हुन्छ ।
अहिले हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौं । यसमा फेरि ओरालो लाग्न सक्छ । औद्योगिक विकास भयो, सबै सूचक राम्रो भयो र न आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्यो । हाम्रो दक्षतामा कमी देखिएन । हामी गर्न सक्छौं भन्ने सावित भयो, तर गर्ने वातावरण बनाउने सरकारको हो ।
बहुवर्षीय योजनाका आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ
प्रदेश नम्बर २ का केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई विनियोजन गरेर सरकारले विकास बजेट दिन्छ । प्रदेश भनेर छुट्टै बजेट हुँदैन । क्षेत्रगतमा द्रुतमार्गको नाममा, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ६ लेनको व्यापारिक मार्गका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याउन सक्छ । वीरगन्जमा पहिले पनि सौताको व्यवहार गरिएको छ ।
अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने आशंका छ । हामीले पूर्व बजेटको विषयमा थुप्रै सुझाव पठाएका थियौं । १० वर्षदेखि दिएका हजारवटा सुझावमध्ये एक÷दुईवटा राखिदिन्छन्, बाँकी छोडदिन्छन् । यहाँका उद्योग व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पनि सुझाव दिएका थियौं । विकासको मामिलामा पनि हामीले भनेका छौं । सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि पनि भनेका छौं । आइसिपी शीघ्र सञ्चालन गर्न भनेका छौं । यसपालि पनि सरकारले देला भन्ने अपेक्षा मात्र हो ।
चुनावकै बेला सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । चुनावको मुखैमा भएकाले अर्थमन्त्रीको बजेट चुनावमुखी होला कि भन्ने आशंका छ । चुनावको बेला बाँड्ने काम बढी हुन्छ, विकासको काम कम हुन्छ । एकल महिला भत्ता, वृद्धवृद्धाको भरणपोषणका लागि एकमुस्ट रकमको व्यवस्था गर्न सके राम्रो होला भन्ने लाग्छ । यस पटक हामीलाई आशंका छ । विकास बजेट दीर्घकालीन हुन्छ, अहिले पनि सरकारले त्यही गर्ला कि भन्ने आशंका छ ।
स्थानीय तहको बजेट पनि योजनाका आधारमा हुनुपर्छ । यो योजनाको लागि यसरी बजेट दिने भनेर । बजेट घोषणा हुन्छ । अनि रातो किताबमा राखिन्छ । त्यसपछि बोलपत्र आह्वान हुन्छ । यस्तो प्रक्रियामा पनि तीन महिना समय लाग्छ । फेरि बोलपत्र आह्वान गर्छ, त्यसको प्रक्रिया गर्दा गर्दै नौ महिना बितिसक्छ । पैसाको घोषणा गर्छ तर खर्च गर्ने विधि नै हुँदैन । अध्ययनमै एक वर्ष बितिसक्छ ।
त्यसले विकासको काम अगाडि बढ्दैन । अबको बजेट एक वर्षको नभएर बहुवर्षीय योजनाका आधारमा बनाउनुपर्छ । ५० करोड बजेट खर्च गर्न एक वर्षमा सक्नुप¥यो भनेर समय तोक्नु भएन । स्थानीय तहको योजनामा समस्या छैन तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । माथिल्लो निकायमै समस्या भएपछि स्थानीय तहमा पनि त्यसका प्रभावहरू त हुन्छन् । घोषणा गर्दैमा बजेट खर्च हुँदैन ।
त्यसलाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने विधि र प्रक्रिया हो । खर्च गर्ने संयन्त्र के हो ? त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि भएपछि केही फरक होला । पैसा निकासा गर्न कति ढिलो भयो ? असार अन्तिममा खर्च गर्ने परिपाटी छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । पैसा निकासा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू भए पनि त्यति सजिलो भने छैन । कुनै–कुनै बजेट सरकारले यस्तो सर्तमा दिएको हुन्छ कि त्यो स्थानीय तहमा खर्च गर्ने अवस्था नै हुँदैन ।
चालू खर्च त भइरहेको छ । ठूला–ठूला आयोजना केन्द्रीय संघमार्फत नै भएका हुन्छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हुँदैन । सानातिना योजना मात्र स्थानीय गाउँपालिकाले बनाउन पाउँछन् । त्यसैले स्थानीय तहमा रहेको स्रोत–साधनबाटै स्थानीय तहमा योजना र बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
व्यवसायमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ
हामी संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेका छौं । ढिलो भए पनि सही बाटोमा गएका छौं । २०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट भनिए पनि त्यो असफल भएर अर्को आन्दोलन भयो । त्यसको मुख्य कारण स्थानीय निकायलाई गर्नुपर्ने विकेन्द्रीकरणको अधिकार हो । त्यो संविधानले दिएन । हाम्रो सत्तामा बहुदल आए पनि परम्परागत भयो । स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेर नै विकास हुन सकेन ।
अहिले संविधानले नै स्थानीय तहको परिकल्पना गरेर स्थानीय तहलाई कर लगाउनेदेखि शासन गर्ने, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ ।स्थानीय तहको प्रशस्त अधिकारसहित समानुपातिक स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । यो अत्यन्त राम्रो हो ।
देशको विकासको मूल आधार भनेकै स्थानीय तह हो । स्थानीय तह बलियो भई विकास भएर त्यो विकासमा जनसहभागिताको परिचालन र सहभागितामूलक विकास हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा राज्यले प्रशस्त साधनस्रोत जुटाउनुपर्छ, तर ज्यादै चुनौती छ । २० वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा र देश संक्रमणकालमा रहेको हुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडिएको छ । आउने बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि उत्तरदायी हुन्छन् होला, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । राज्यले दिएको स्रोतलाई र लगानीको सदुपयोग गर्न भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता कायम गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय बनाएर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नत्र हामी फेरि चुक्छौं । हामी सबै नयाँ संरचनामा छौं ।
प्रदेशले के कर उठाउने, स्थानीय तहले के उठाउने र संघलाई के भनेर सविधानमै उल्लेख गरिएको छ । मेरो अनुभवमा भारत र अन्य मुलुकको संघीय राज्य हेर्दा संघ बलियो भइदिएन भने विकासमा बाधा पुग्छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर पञ्चेश्वर परियोजना, सप्तकोसी, अरुण तेस्रोजस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकियो भने हामी निकै अगाडि बढ्छौं ।
हामीले २० वर्षमा आर्थिक उपयोगितातर्फ ध्यान दिएनौं, त्यसैले अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तराईमा धान धेरै फलाउँछौं भनेर विकास हुनेवाला छैन । यहाँ ५० हजार कामदारले रोजगारी पाउने उद्योग खोल्ने उर्वर भूमि त छ, तर हामीले उद्योगको विकास गर्ने काम कहिल्यै गरेनौं ।
अब निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट व्यवसायमुखी अर्थतन्त्रमा हामी आएनौं भने कुनै क्षेत्रको भविष्य छैन । भूमिसुधारको नाममा जग्गा टुक्राटुक्रा गरियो । लगानी गर्छु भन्दा उद्योगपतिले पाएका छैनन् । उत्पादनलाई कहिल्यै जोड दिइएको छैन । २०२१ सालदेखिको प्रणाली नै खराब छ । उत्पादनमुखी भूमि नीति सरकारले कहिल्यै ल्याएन ।
सामूहिक सिँचाइको व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा मात्र ध्यान दिँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । २ सय बिघा जग्गामा एउटै उद्योगपतिले व्यवसाय गर्न पायो भने जुनसुकै आधुनिक प्रविधि ल्याउन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता उद्योगपतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जडीबुटी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
बजेटका विषयमा केन्द्रले भन्सार राजस्व, केन्द्रीय कर उठाउन वित्तीय आयोग बनाएर बाँडफाँड गरिदिएको छ । स्थानीय तहको करको व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ । त्यसभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । केन्द्रको बजेट बनाउँदा कनिका छरेजस्तो गर्नु हुन्न । केन्द्रको काम राष्ट्रिय उद्योग, आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने हो ।
अब बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो सर्त भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि तालिमप्राप्त र अनुभवी छैनन् । उनीहरूमा अनुगमन गर्ने अनुभवको अभाव छ । जनप्रतिनिधिहरू कति उत्तरदायी र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्छन्, त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन भर पर्छ ।
बजेट योजनामुखी हुनुपर्छ
सञ्चालक रारा चप्पल उद्योग
अहिले बजेट केन्द्रीय तहबाटै आउँदै छ । यस पटकको बजेट राजस्वमुखी भने हुनु हँदैन । उत्पादनमुखी, सामाजिक उत्थान गर्न सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादन नै मुख्य कुरा हो ।
सेवामूलक र पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुन सक्ने खालका उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सकिए राजस्व आफैं बढ्छ । मुलुकको आर्थिक क्षमता छैन भने किन धेरै राजस्व उठ्ने खालका वस्तु आयात गर्ने ? आफ्नो उत्पादन गरेर खर्च गर्ने अवस्था नभएसम्म देशको आर्थिक विकास निकै गाह्रो छ । ठूला गाडी चढ्ने आर्थिक क्षमता छैन भने गाडी आयात रोकौं ।
३ सय प्रतिशत भन्सार किन तिर्ने ? मुलुकबाट हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यस्ता युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै काम दिन सक्नुपर्छ । युवा जनशक्ति रोक्न सक्यौं भने मुलुकको विकास चाँडै गर्न सक्छौं ।
यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । बजेटको आकार ठूलो होस् या सानो तर समयवाधिभित्र खर्च हुनुपर्छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
साना धेरै भन्दा ठूला थोरै परियोजनामा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवाशक्ति विदेश पलायनले रेमिट्यान्स भित्रिए पनि विकृति बढेको छ । यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
लोकप्रियभन्दा पनि योजनामुखी बजेट हुनुपर्छ र समयमा खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको बजेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । स्थानीय तहको बजेट आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ । बजेट आएको वर्षमै खर्च हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको नाम मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, आधारभूत सेवासुविधा पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले बजेट बनाउँदा माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्ने बल्छी दिनुपर्छ ।
संघले अहिले नै प्रदेशलाई बजेट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन । प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा बजेट मात्र विनियोजन गरेर हुँदैन । प्रदेशको संरचना विकास भएपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहमतिमा आएर प्रदेशको गठन नभएसम्मका लागि त्यस क्षेत्रको बजेटलाई अन्य विकासमा लगाउनुपर्छ ।
१५ वर्षदेखि बजेटमा डिम एक्पोर्टको कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
शिक्षाका लागि वार्षिक अर्बौं रकम बिदेसिएको छ । हामीले स्वदेशमै राम्रो शिक्षा दिने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । बजेटमा शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतमा अर्बौं रकम थुप्रिएर बसेको छ । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नियमावली बनाउनुपर्छ ।
नेपालको हजारौं बिघा जमिन गुठीका नाममा छ, त्यसलाई उपभोग गरेर उत्पादन बढाउने खालको क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । देशमा रहेको आयस्रोतलाई सही ढंगबाट परिचालन गर्न सक्यौं भने बाहिरबाट हामीले सहयोग, अनुदान, ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतासमेत पर्नेछैन ।